PineTime, Pine64 ၏ရေစိုခံစမတ်နာရီ Linux မှ
PineTime, Pine64 ရေစိုခံစမတ်နာရီ
မကြာသေးမီက အဆိုပါ Pine64 အသိုင်းအဝိုင်း (ပွင့်လင်းသောကိရိယာများဖန်တီးရန်ရည်စူးသည်) PineTime စမတ်နာရီကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် အရာ 1 မီတာမှာရေ၌နှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုဆီးတားနိုင်။
PineTime ကိရိယာကိုယခင်ကဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာအဖြစ်နှင့် on-board debugging interfaces များကိုလွယ်ကူစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းများအဖြစ်သာရရှိသော်လည်းယခုအခါစီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။
InfiniTime 1.2 firmware ဗားရှင်းအသစ်ဖြင့်ကိရိယာကိုတင်ပို့သည် NRF52832 MCU microcontroller (64 MHz) ကိုအခြေခံထားပြီး 512 KB Flash memory စနစ်အသုံးပြုထားသည်။ အသုံးပြုသူအချက်အလက်များအတွက်4MB Flash၊ 64 KB RAM၊ ၁.၃ လက်မထိတွေ့နိုင်သောမျက်နှာပြင် 1.3 × 240 pixels (IPS) 240K အရောင်များ), Bluetooth 65, accelerometer (pedometer အဖြစ်အသုံးပြုသည်), သွေးခုန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်တုန်ခါမှုမော်တာ။ ဘက်ထရီအားသွင်းမှု (၁၈၀ mAh) သည်ဘက်ထရီသက်တမ်း ၃-၅ ရက်အတွက်လုံလောက်သည်။ အလေးချိန် ၃၈ ဂရမ်။
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေတဲ့ PineTime မှာသင့်ကိုလက်တွေ့ရန်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်အလွန်ကောင်းသောသတင်းကိုစတင်ပါရစေ။ PineTime အသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုသည်အဆင်ပြေစွာရှိပြီးအစီအစဉ်အရအားလုံးသွားသည်ကိုကျွန်တော်သာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ post ကိုတိုက်ရိုက်သွားသည့်အခါထို့နောက်! တံဆိပ်ခတ်တစ် ဦး ချင်းစီ PineTime ယူနစ်ရရှိနိုင်ပါသည်! ဤ PineTimes များကိုနောက်ဆုံးပေါ်နှင့် InfiniTime bootloader များဖြင့်အဆင့်မြှင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်ရရှိချိန်တွင်သင့်နာရီ၏အသုံးအများဆုံးကိုရရှိနိုင်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း PineTimes အသုတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ရန်စက်ရုံသည်ဤပစ်လွှတ်မှုကိုစောင့်နေခဲ့သည်။ သတိပေးချက်အနေဖြင့် - ဆက်လက်၍ အစိတ်အပိုင်းများရှားပါးမှုကြောင့် PINE64 အားအသစ်သောအသုတ်အသစ်အတွက် Accelerometer ကိုအတင်းအဓမ္မအသုံးပြုခိုင်းသည်။ မူရင်းမရှိတော့သဖြင့် InfiniTime ကဒီချစ်ပ်အသစ်အတွက်အထောက်အပံ့ကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလည်ပတ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်။
ကိရိယာ၏မူလ firmware သည် InfiniTime ဖြစ်သည် နှင့် RealRTOS 10 real-time operating system၊ LittleVGL7ဂရပ်ဖစ်စာကြည့်တိုက်နှင့် Bluetooth NimBLE 1.3.0 stack ကိုအသုံးပြုသည်။ Firmware loader သည် MCUBoot ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ၎င်းကို Bluetooth LE မှစမတ်ဖုန်းမှထုတ်လွှင့်သော OTA updates မှတစ်ဆင့် firmware ကို update လုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဗားရှင်းအသစ်တွင်ပြောင်းလဲမှုများတွင်“ metronome” application၊ “ timer” application ၏တိုးတက်မှုနှင့် RAM သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းမှတ်ဉာဏ်တို့ပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အရွယ်အစား firmware သည် 420 KB မွ 340 KB သို့လျော့ကျသွားသည်။
user interface ကုဒ်ကို C ++ တွင်ရေးထားသည် နာရီ (ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ analog)၊ လှုပ်ရှားမှုခြေရာခံ (နှလုံးခုန်နှုန်းမော်တာနှင့် pedometer) ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါ ၀ င်သည် စမတ်ဖုန်း၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ ပြန်ဖွင့်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုမှအဖြစ်အပျက်များအကြောင်းသတိပေးချက်များကိုပြသည် စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိတေးဂီတ၊ ဘရောင်ဇာတစ်ခုမှညွှန်ကြားချက်များ၊ နာရီတစ်နာရီနှင့်ရိုးရှင်းသောဂိမ်းနှစ်ခု (Paddle နှင့် 2048) ကိုပြသည်။
ချိန်ညှိချက်များမှတဆင့်၊ သင်မျက်နှာပြင်ပိတ်သည့်အချိန်၊ အချိန်ပုံစံ၊ နိုးထမှုအခြေအနေများ၊ မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဘက်ထရီအားသွင်းမှုနှင့် firmware ဗားရှင်းများကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
စမတ်ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာများတွင်နာရီကိုထိန်းချုပ်ရန် Gadgetbridge (Android အတွက်)၊ Amazfish (Sailfish နှင့် Linux) နှင့် Siglo (Linux အတွက်) အက်ပ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Web Web API ကိုထောက်ပံ့ပေးသောဘရောက်ဇာများမှနာရီများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန် Web application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဝါသနာရှင်များအတွက် မင်္ဂလာပါ Malila အစားထိုး firmware အသစ်ပြင်ဆင်ပြီ။ RIOT OS ကိုအခြေခံပြီး၊ GNOME style interface (Cantarell ဖောင့်၊ အိုင်ကွန်များနှင့် GNOME စတိုင်) တပ်ဆင်ထားပြီး MicroPython နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
InfiniTime နှင့် Malila PineTime တို့သည် Zephyr firmware-based platform, Mynewt OS, MbedOS, TinyGo, WaspOS (Micropython-based) နှင့် PinetimeLite (InfiniTime EEPROM တိုးချဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း) ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ စက်ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်၊ ၄ င်း၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ဒေါ်လာ ၂၆.၉၉ ဖြစ်ပြီးသင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပါတယ် အောက်ပါ link ကို။
သင်ကအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်သင်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည် အောက်ပါ link ကိုမှာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » PineTime, Pine64 ရေစိုခံစမတ်နာရီ
Switch ကိုယှဉ်ပြိုင်ရန် Valve ၏ console Steam Deck